Endotracheal fantsona mialoha (fampiasana am-bava mialoha)
• Vita amin'ny PVC, kilasy tsy misy poizina, mangarahara, mazava ary malama.
• Ny tsipika radio opaque mandritra ny halavany mba hanaovana sary an-tsary x-ray.
• Miaraka amin'ny cuff pressure ambany ambany. Cuff avo lenta dia manisy tombo-kase tsara ny rindrin'ny tracheal.
Fantsona Endotracheal namboarina mialoha (fampiasana nasal.
• Ny tsipika radio opaque mandritra ny halavany mba hanaovana sary an-tsaina x.
Saron-tava fampiasana fanafody fanary azo ampiasaina
CE voamarina, ao amin'ny lisitra fotsy ao amin'ny Chamber of Commerce China ho an'ny fanafarana sy ny fanondranana fanafody sy vokatra ara-pahasalamana, fisoratana anarana ao an-trano.